Kitra – «Orange pro league 2021»: mitaraina sy mila vonjy ny ekipan’ny 3FB Toliara | NewsMada
Par Taratra sur 26/01/2021
Andro telo izay no tontosa eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Orange pro league 2021”. Mizotra tsara ny fihaonana, saingy misy ekipa efa mandefa fitarainana sahady.
Asa na hahatontosa hatramin’ny farany ny fifaninanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Orange pro league”, taranja baolina kitra na tsia ny ekipan’ny 3FB Toliara, izay manana olana goavana, amin’izao fotoana izao. Miantso vonjy amin’ireo tomponandraikitra ara-mpanjakana, ankehitriny, ireo mpilalao sy ny mpitantana ny ekipa hanamboarana haingana ny kianja Me Kira Andaboly, hany tokana azo handraisana lalao ofisialy ao Toliara. Tena sempotra tanteraka ny 3FB amin’ny fiatrehana ireo lalao isan-kerinandro, amin’ity fifaninanam-pirenena ity.
Noho izay tsy fisian’ny kianja tokony handraisany ireo lalao hafa izay, voatery miakatra ao Fianarantsoa ry zalahy, miatrika izany. Toy ny ekipa mivahiny an-tanin’olona ihany, araka izany, ny 3FB Toliara ary mahatsiaro fa tena maty antoka satria tsy mba milalao eo anatrehan’ireo mpanohana azy.
Ankoatra izay, olana ho an’ireo mpilalao ihany koa ny tsy fahafahana mijanona ela loatra any an-tanin’olona noho ny asa aman-draharaha. Vokatr’izay, maro ireo mpilalao tompon-toerana no tsy afaka miatrika ireo fihaonana tokony hatao ka misy fiantraikany betsaka amin’ny voka-dalao, izany.
Tsiahivina fa mifaninana ao amin’ny kaonferansy atsimo ny 3FB. Efa nahatontosa lalao telo ary resy hatrany tamin’ireo fihaonana vitany ireo. Tsy mbola manana isa, ary mitana ny laharana farany ao amin’ity kaonferansy ity. Raha ny fandaharan-dalao, hidona amin’ny CS-DFC Vakinankaratra etsy amin’ny kianja Elgeco By Pass, indray ny 3FB, amin’ny alahady 31 janoary izao, eo amin’ny andro fahefatra amin’ity “Orange pro league”, ity.